यो आफ्नो पत्नी को सोच बिना याद गर्न असम्भव छ। तिनीहरूले सधैं सँगै, सँगै सधैं छन्। त्यसैले, Mukasey अनातोली, एक मानिस जसको आँखा हामी चलचित्र को धेरै पुस्ताका द्वारा प्रेम संशोधन दर्जनौं वा पटक सयौं छ: "कार खबरदार", "! ध्यान, कछुवा", "परिवार कारणका लागि", "द सर्कस राजकुमारी", "एक एक्लो मानिस लागि जाल" "ठूलो ब्रेक"। Svetlana Druzhininoj - यो बिल्कुल सबै directorial यसको दोस्रो आधा काम गर्दछ को एक अपरेटर छ। र आफ्नो रचनात्मक tandem सधैं धेरै फलदायी भएको छ।
जुलाई 26, 1938 मिखाइल र Yelizaveta Mukasey जन्म छोरा को परिवार मा - Mukasey अनातोली। आफ्नो परिवार हुँदा औसत सोभियत परिवार संग तुलना केहि असामान्य थियो। आमाबाबुले स्काउट्स illegals थिए। कुल, छोराछोरी तिनीहरूले छैनन्, र जब (सात को दिन, दस अधिकतम लामो तर) सकेसम्म मास्को आए भन्ने तथ्यलाई बावजुद बारेमा बीस वर्ष आमाबाबुको देखेको छैन (परिवारमा एक केटी एला थियो) यो नजिकै थियो र पार्सलहरू टिप्पणीहरू बित्यो।
छत र एला आमाबाबुले बारेमा केही जो कोहीले बताउन सक्दैनन् भनेर बुझे। बच्चाहरु लगनशील भई यो गोप्य राख्न। राजधानी मा, छोराछोरीलाई राम्रो आफ्नो मित्र भएका छन् जो "मालिकहरुलाई" को हेरविचार गरे।
Microbe छायांकन सानो Mukasey अप पिताजी त्यहाँ वाणिज्य दुत काम गर्दा लस एन्जलसका फिर्ता लिनुभएको। Tolia, चाचा चार्ली (चार्ली Chaplin) सम्झना सक्छ चाचा THEODORE (Dreiser) संग खेल्दै। अब सम्म, परिवार बाल्यकाल सम्झनाहरु दस्तावेज जो एक फिलिम संग बक्स राखिएको।
तिनीहरूले महसुस, तर पनि यस्तो उन्नत उमेर मा 97. अझै बाँच्न थालेका थिए - पिताजी, 101 वर्ष बाँचे मेरो आमा।
सिनेमा को जादुई दुनिया
अनातोली Mukasey, हलिउड स्टार संग सभाहरूमा आफ्नो बाल्यकाल मा, प्रभावित त्यसपछि पनि आफू र अन्तिम निर्णय लागि महत्त्वपूर्ण लिए भइरहेको - तिनीहरूलाई लागि रोचक हुनेछ दर्शक देखाउन। जब एउटा अपरेटर पेशा छान्ने को निर्धारण कारक क्यामेरा आउन धेरै वर्ष समय बचत गर्न सक्ने थियो।
1961 मा उहाँले Mukasey अपरेटर स्नातक VGIK। सुरुमा उहाँले विषयहरू एक नम्बर लिएर, को Leningrad newsreel स्टुडियोमा काम गरे। र 1962 देखि उहाँले फोटोग्राफी "Mosfilm" निर्देशक छ।
उहाँले अझै पनि दर्शक अपरेटर आँखा मार्फत चलचित्र हेर्दै, र तिनीहरूले हुनुपर्छ स्क्रिन, सबै कुरा स्पष्ट र प्रस्ट छ कि विश्वास गर्दछन्। प्रत्येक पर्दा छवि पछि - यो नै चित्रकला, तर गतिशील छ।
त्यसैले, आफ्नो सबै चित्रहरु - एउटा सानो कृति, फेरि फेरि संशोधन गर्न चाहन्छ जो यो सबै कसरी धेरै वर्ष पहिले हटाइएको थियो बावजुद, "विवाहपूर्वको Hussar," "मलाई एक उजुरीहरु बुक", "नाक," दिनुहोस् "Vivat, cadets!" । यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ, र सबै छ "महल Revolutions को रहस्य" फिलिमहरु को श्रृंखला।
जोडी VGIK मा एक विद्यार्थी अझै पनि बेला भेटे। अनातोली Mukasey जसको फोटो त्यसैले अक्सर विभिन्न पत्रिका फेला गर्न, उहाँले फोटोग्राफी विभाग मा अध्ययन र Svetlana Druzhinin - अभिनय मा।
Fateful बैठक भलिबल अदालत को संस्थान को लकर कोठामा भयो। समयमा Svetlana पहिले नै बढ्दो चलचित्र तारा र एउटा अचम्मको सौन्दर्य थियो। उनको खुट्टा बल रोल्ड गर्दा, त्यो माथि देख्यो र संस्थान मानिसहरूले गरेको भलिबल टीम को कप्तान थियो जो एक जवान देखे। यो अनातोली Mukasey लगभग 60 वर्ष को लागि जसको जीवनी दिन देखि, inextricably स्त्री संग जोडिएको छ, थियो। धेरै वर्ष पछि, त्यो बल अन्वेषण गर्न मात्र एक बहाने थियो स्वीकारे।
Mukasey एक वर्ष Druzhininoj भन्दा कान्छा थिए र बिल्कुल उनको सँगी विद्यार्थीहरू मन थिएन। तिनीहरूले त्यो लामो-सशस्त्र र लामो-खुट्टे Lad मा पाठ्यक्रम मान्यता सौन्दर्य फेला छ भनेर बुझ्न सकिएन। तर दम्पतीले तिनीहरूले सँगै सबैतिर भयो, सँगसँगै थियो: भलिबल प्रतियोगिता लागि संस्थान मा सिनेमा, मा। यो विवाह गर्न आउँदै छ कि सबै यसलाई अहिले बुझ्ने गरिन्छ। दशकसम्म उसलाई बाँच्न: Mukasey अनातोली Svetlana यो विवाहको निष्कर्षमा एउटा स्वार्थी लक्ष्य थियो सम्झे।
हामी भने छ रूपमा, मिखाइल र Yelizaveta Mukasey, आमाबाबु अनातोली र आफ्नो बहिनी एला, एक शताब्दीका विदेश काम गरेको छ को एक चौथाई illegals स्काउट्स। पूर्ण धेरै भाषाहरू owning, तिनीहरूले एउटा उच्चारण रूसी बताउनुभयो।
आमाबाबुले मास्को मा शायद थिए, तर सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई को मामिलामा थाह थियो। आमाले छोरी अघि छोरा उनको भेट Druzhinin हुनेछ भनेर सिके। तिनीहरूले Gagra "विभाग स्टोर को प्रदर्शन को लागि" painting मा देख्यो जब अनातोली मुख्य पात्र जस्तै उनको आमा (Druzhinin सोनी Bozhko को भूमिका खेलेका) कि सोधे। र उहाँले उनको विवाह बताए (कि हंसी मा, गम्भीर चाहे)। भाँडाकुडा त्यसपछि मात्र 17 वर्षको र आफ्नो प्रतिज्ञा थियो, उहाँले चाँडै बिर्सन्छन्। त्यो क्षण सम्म जब म संस्थान मा Svetlana देखे।
तिनीहरूले आफ्ना आमाबाबुको Druzhinin अन्वेषण गर्न पाहुनाहरूलाई जाँदा राम्रो घुँडाको मा एक कायता रूपमा सम्झना। एक भव्य पोशाक र सुट तीन - तिनीहरूले घर को ढोका भव्य साँझ कपडे थिए खोलियो जब त्यो, सेतो कलर संग एक भद्र कालो पोशाक र अनातोली आमाबाबुले लगाउँथे। पहिलो पटक त्यो एक विशाल आतंक महसुस: तिनीहरूलाई हुनेछ कि, र तिनीहरूले आफ्नो छोरा उनको आफ्नो विवाह देखि dissuade गर्न चाहनुहुन्छ भने। छाप र भावना त बलियो थियो कि नसाहरू Svetlana धेरै दिनको लागि बिरामी। स्कार्फ, अत्तर र चुइगम संग सेतो हाते झोला: त्यसपछि म मेरो आमा बाट एक उपहार संग अनातोली आए। र उहाँले स्नातक अघि विवाह गर्न आमाबाबुले तिनीहरूलाई सोधे बताए।
विवाह समयमा एक लक्जरी रेस्टुरेन्ट मा धेरै सुन्दर थियो। र अर्को दिन, आमाबाबुले राजधानी मा काम गर्न, पत्र हल्का छोडेर, यो परिवार मा सिकेका सबै, राखिएको भन्ने हुनुपर्छ गोप्य, र यो विदेश यात्रा गर्न पाइहाल्छन् भन्ने तथ्यलाई बताउँदै बाँकी। तर आफ्नो प्रेमको खातिर, त्यो धेरै बलिदान गर्न तयार भएको थियो। यो सबै समय बाहेक, त्यो चुपचाप व्यवस्था मा आफ्नो आमा देखि पाठ गरे। समय, Mukasey अनातोली हल्का आफ्नो आमा को बस प्रतिलिपि बताए।
परिवारको कान्छो पुस्ता
माइकल - यो त यसलाई भलिबल आफ्नो छोरा को भाग्य निर्धारण थियो भयो। तिनले पोपको, सिनेमाटोग्राफर र भलिबल जस्तै। एक पटक माइकल मेरो आमा भनिन्छ र उहाँले आफ्नो प्रेमिका संग आमाबाबुले चिनाउने देश आउन भन्नुभयो। तालिका मा पहिलो Druzhinin उत्साहित त्यहाँ उद्धार गर्न लगभग केही छ, तर जब त्यो प्रेमीका छोरा, उनको को आनन्द देखे ... कुनै सीमा थियो। आखिर, यो एक धेरै थियो Ekaterina Gamow! हो, भलिबल संसारमा दुई-समय च्याम्पियन। मा-व्यवस्था भविष्यमा पहिलो मिनेट देखि एक मूल रूपमा misha को आमाबाबुको अपनाए थियो।
अब, Katya संलग्न जो कुनै एक मिलान, एक ठूलो परिवार को उपस्थिति बिना आयोजित छ। पति र आफ्नो आमाबाबु सधैं उनको समर्थित।
तिनीहरू यहाँ spouses र आमाबाबु, Svetlana Druzhinin र अनातोली Mukasey छन्। जहाँ सेलिब्रेटीहरू सामान्यतया प्रदर्शन सार्वजनिक गरे, छोराछोरी, फोटो सधैं परिवार मा भएको प्रेम गर्नुभयो। तर 1986 मा दुखद मृत्यु पछि, आफ्नो जेठो छोरा, अनातोली, परिवार माथि, अक्सर थप र्याली गर्न प्रबन्ध, विपरीत तिनीहरू सँगै अनुभव एक साधारण शोक मा, हुन्छ रूपमा भङ्ग छैन। कान्छो को एक प्रेम मात्र वृद्धि। आखिर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ, प्रस्तुत छ जो Mukaseis पुरानो (आमाबाबुले एनाटोलिया) जूनियर (Svetlana र उनको छोरा) - सधैं सँगै, कुनै कुरा के आश्चर्य जीवन तिनीहरूलाई प्रस्तुत छैन हुन।
"Uni" बाट Kuzma - अभिनेता को नाम?
"Colombiana"। पहिलो योजना को अभिनेता: Zoe Saldana
छोटो चलचित्र "खैरो को 50 Shades।" कास्ट
Eau डे "सिगार": Remi Latour को इतिहास मा एक नयाँ चरण
कसरी कराइ, ओवन वा माइक्रोवेव प्रयोग गरेर कटुस तलना गर्न
Ingrown कपाल। हामी बीच सिजन लागि तयारी सुरु।
निर्भर व्यक्तित्व विकार: उपचारको कारणहरू, लक्षणहरू र विशेषताहरू